Horyaalka Serie A-da Talyaaniga oo 7 sano kaddib kaalinta 3-aad kala baxay Bundesliga (EPL oo uu baacsanayo) – Gool FM
Horyaalka Serie A-da Talyaaniga oo 7 sano kaddib kaalinta 3-aad kala baxay Bundesliga (EPL oo uu baacsanayo)
Raage September 28, 2017
(Roma) 28 Sebt 2017 – Horyaalka talyaaniga ee Serie A ayaa 7 sanadood kaddib ka sara maray horyaalka Jarmanka ee Bundesliga marka ay timaaddo qiimaynta natiijooyinka Yurub ku dhisan ee loo yaqaanno UEFA co-efficient rankings, ka gadaal markii ay wada badiyeen kooxaha Talyaaniga ku metelaya Champions League.
Juventus ayaa garaacday Olympiakos xalay, hala Roma ay fiidkii ka badisay Qarabag, taasoo ay raacayso Napoli oo 3-1 ku dhufatay Feyenoord habeenkii Talaadadii, taasoo ka dhigan markii ugu horreeysey tan iyo Sebtember 2011 ee ay wada badiyaan dhamaanba 3 koox oo Talyaaniga u dheelaya CL, waxayna Serie A ka dhigtay horyaalka 3-aad kaddib La Liga iyo EPL oo ay sanka ku hayaan.
Qiimayntan UEFA oo loo sameeyo hab ku salaysan 5 sano, iyadoo dhibcaha loo qaybinayo dhamaanba kooxaha dalkaasi uga qayb gelaya tartanka oo ay xitaa ku jiraan kuwa haray.
Marka ay halkaa taagan tahay, Talyaaniga waa u wada dhan yihiin kooxihii tartanka uga qayb gelayay, halka Jarmanka ay ka hartay SC Freiburg oo ay Europa League ka reebtay Domžale. Waxaa caawa EL ciyaaraya 3 koox oo Talyaani ah iyo 3 Jarman ah.
Sidaa darteed, haddii uu fasal-ciyaareedku maanta dhamaado, waxay Serie A kaalinta 3-aad ku gashay 64.082 oo dhibcood marka la isku xisaabo 5-tii sano ee ugu dambeeyay, halka Bundesliga uu u dhacay 4-aad isagoo leh 63.998.
Horyaalka England ee Premier League oo awal 3-aad ku jirey ayaa isna dhowaantan kaalinta 2-aad ka xoogey Jarmanka wuxuuna leeyahay 66.034, halka La Liga oo aad u fogi uu leeyahay 92.712.
Serie A ayaa kaalinta 2-aad kala bixi doona Premier League fasalka 2019 haddii ay kooxaha Talyaanigu ka natiijo fiicnaadaan dhiggooda EPL, maaddaama uu fasalkii 2013-14 ka bixi doono xisaabta 5-ta sanaleeyda ah.
Taasoo ka dhigan in horyaalka Talyaaniga ee Serie A uu 8 dhibcood horreeyo marka la eego bandhiggoodii fasalkii 2014-15 oo ka fiicnaa dhiggooda EPL.
Yeelkeede, isbeddelkani haatan micne sidaa u wayn ma yeelan doono sidii sanadihii dambe haddii uusan dalku ka dhicin booska 4-aad, maaddaama haatan CL ay min 4 ka helayaan 4-ta horyaalka ee ugu sarreeysa qiimaynta UEFA.
Waxaana sii micne dilaysa in horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 oo hadda ku jira kaalinta 5-aad ee UEFA coefficient, uu la taagan yahay 48.748 dhibcood oo qura, taasoo ka dhigan inuusan waqti dhow rajo ka lahayn inuu soo qabto afarta sare.
Ancelotti oo laga yaabo inuu waayo xilkiisa Bayern Munich kadib guul daradii xalay
AC MILAN VS RIJEKA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!